Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka oo ku baaqay in la dhiso Ciidanka Qalabka sida - Hablaha Media Network
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka oo ku baaqay in la dhiso Ciidanka Qalabka sida
HMN:- Kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Virginia, Maryland iyo Magaalada Washington ayaa looga hadlay mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya.
Kulankan oo ka dhacay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa waxaa xooga lagu saaray dhibaatooyinka federaalka uu u keeni karo Soomaaliya, Sidii loo heli lahaa ciidamo xoog leh oo ay Soomaaliya yeelato iyo sidii ay ciidanka ajnabiga ah uga bixi lahaayeen Soomaaliya.
Cabdi Xasan Ajaa oo ka mid ah qaban qaabiyaasha kulanka ayaa sheegay in marxalada siyaasadeed ee Soomaaliya ay maanta tahay mid aanan lagu farxi karin marka laga eego musuq maasuqa xun ee lagu eedeeyo inuu ka dhex jiro hey’adaha iyo hogaanka Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Waxa kale oo uu sheegay in siyaasada Soomaaliya ay noqotay mid lacag lagu kala gato, isaga oo tusaale usoo qaatay musuq maasuqi hareeyey doorashooyinki maamul goboleedyada, kuwa xildhibaanada golayaasha baarlamaanka iyo tan hada la filayo in lagu soo doorto madaxda sare ee Dowlada.
“Siyaasada Soomaaliya waxay noqotay mid lacag lagu kala iibsado, doorashooyinka maamul goboleedyada, baarlamaanka iyo madaxweynaha dhamaantood waa lacag.” Ayuu yiri Ajaa.
Shukri Cadow oo ka mid aheyd qaban qaabiyaasha kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee gobolka Virginia ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in ahmiyada koowaad la siiyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, halki lacago badan lagu bixin ciidamada AMISOM ee howlgalka nabad ilaalinta u joogo Soomaaliya.
Marwo Shukri ayaa sheegtay in Soomaaliya ay hadda joogaan ilaa iyo 21,500 oo askari kuwaasoo ay sanad walbaa uu Midowga Yurub ku bixiyo malaayiin doolar Mareykanka. Waxa ay u sheegtay madaxda Soomaalida in loo baahanyahay in lacagaha ku baxo AMISOM loo weeciyo qalabeynta, tababarka iyo mushaaraadka ciidanka Soomaaliyeed.
Mama Shamsa oo ka mid aheyd ka qeybgalayaasha kulanka ayaa sheegtay in dhanka wanaagsan marka laga eego ay Soomaaliya u qabsoomeen wax badan marka loo fiiriyo ka hor inta aanan la helin dowladan hadda jirto iyo kuwi kumeel gaarka ahaaba.
“Waxaan nahay kaliyah 4 sano jir, ogaada waxaan ka imaanay 30 sano oo colaad ah, marka fadlan yaanan la niyad jebin.” Ayey tiri hooyadan ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Virginia.
Qabanqaabiyaasha kulanka ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdi Xasan Ajaa, Filsan Darmaan, Abukar Fidow, Prof. Maxamed Cali (Maxamed Dheere) Shukri Cadow, iyo qaar kale.
Kulankan ayaa kusoo beegmay xilli dalka Soomaaliya ay ka socdaan ololaha doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliya.